Khilaafkii Galmudug oo heshiis taariikhi ah laga gaaray – XOGMAAL.COM
Kn: Xaflad ay ka soo qayb galeen madaxda Qaranka, madaxda Maamul Gobolleedyada iyo Beesha Caalamka oo ka dhacday xarunta dalka looga taliyo ee Villa Somalia ayaa lagu soo afjaray khilaafkii dhex yaalay Ahlu Sunna iyo Galmudug. Waxaa qalinka lagu duugay heshiis taariikhi ah oo ka kooban 14 qodob, kuwaasi oo gundhig u ah taabo galinta maamul gobolleedka Galmudug.
Marka laga reebo nooca awood qaybsi ee maamulkii hore ee Galmudug iyo Ahlu Sunna, waxaa xiiso gooni ah leh jago cusub oo ku soo biirtay saaxada maamul gobolleedyada taasi oo u dhigantay wasiirka koobaad ama ra’iisul wasaare, laakiin si farsamaysan loo dhigay, looguna yeeray qudoomiyaha golaha wasiirada. Jagadan cusub waxaa loo asteeyay madaxweynaha maamulkii Ahlu Sunna, Sh. Shaakir, halka madaxweynihii Galmudug, Mudane Xaaf iyo ku-xigeenkiisu ay sidii u joogayaan. Waxaa sidoo kale xeshiiska kamid ah in awood qaybsi lagu saleeyo dhamaan hay’addaha dawliga marka laga reebo sadexda jago ee aan kor ku sheegnay iyo waliba gudoomiyaha Maxkamadda Sare oo loo asteeyay inay magacawdaan Ahlu Sunna.
Heshiiskan taariikhiga ahi wuxuu soo afjarayaa qalalaase dabo dheeraaday oo galaaftay nafta dhalinyaro badan iyo burburka hanti xad dhaaf ah. Walow dad badan ay qayb ka ahaayeen dadaalada lagu soo afmeeray shiqaaqada ka dhex aloosnayd reer Galmudug ayaa hadana waxaa la oran karaan amaanta inteeda badan waxaa iska leh madaxweyne Xaaf oo muujiyay masuuliyad iyo dareen wadaniyadeed taasi oo saldhig u ahayd xalinta khilaafka labada dhinac.
Hadaba halkan hoose ka akhriso heshiiskii oo dhamaystiran: